ECO-POLITICLE 8 - Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live
गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर भारत सरकारद्धारा ३० एम्बुलेन्स सहयोग
काठमाडौंमा भारतीय गणतन्त्र दिवस
भारतको ७१औं गणतन्त्र दिवस काठमाडौंमा एक समारोहको आयोजना गरेर मनाइएको छ । भारतीय दूतावास लैनचौरमा आयोजित समारोहमा कार्यवाहक राजदूत डा. अजय कुमारले राष्ट्रिय झण्डाको झण्डोत्तोलन गर्दै भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदको सन्देश पढेर सुनाए ।
सो समारोहमा कार्यवाहक राजदूतले १ वीर नारी, ८ एकल महिला र मृतक सैनिकका ५ जना निकटतम नातेदारलाई ५.९७ करोड नेपाली रुपैयाँ नगद तथा कम्मल वितरण गरी सम्मान गरे।
सो अवसरमा नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासतर्फको यात्रामा नेपालसँग हातेमालो गर्ने भारतको प्रतिबद्वतालाई दोहोरयाउँदै दूतावासले नेपालका विभिन्न अस्पताल तथा गैरनाफामूलक परोपकारी संस्थालाई ३० वटा एम्बुलेन्स तथा शैक्षिक संस्थाहरुलाई ६ वटा बस पनि वितरण गरयो । त्यसैगरि दूतावासले नेपालका सबै प्रदेशमा रहेका विभिन्न ५१ पुस्तकालय तथा शैक्षिक संस्थाहरुलाई पुस्तक प्रदान गरेको छ।
हालसम्म भारत सरकारले नेपालका ७७ जिल्लाका विभिन्न अस्पताल, गैरनाफामूलक परोपकारी संस्था र शैक्षिक संस्थाहरुलाई ७८२ एम्बुलेन्स तथा १५४ बस प्रदान गरेको छ ।
उक्त समारोहमा दूतावासका अधिकारी तथा उनीहरुको परिवारका साथै नेपालमा रहेका भारतीय समुदायका सदस्यहरु तथा शुभेच्छुकहरुको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा केन्द्रीय विद्यालय, मोडर्न इन्डियन स्कुल तथा स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक केन्द्र काठमाडौंका विद्यार्थीले गीतहरु प्रस्तुत गरेका थिए।
आइतबार नै कार्यवाहक राजदूतले इंडिया हाउसमा स्वागत समारोहको आयोजना गरेका थिए । सो समारोहमा नेपालका उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुन मुख्य अतिथि रहेका थिए ।
कार्यक्रमका केहि क्लिक :
पाम आयाल प्रतिबन्धमा पूर्नविचार गर्न भारत सरकारलाइ नेपालको आग्रह
एनआईबि संवादादाता,नयाँ दिल्ली
नेपालले भारत सरकारलाइ पाम आयलको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धमाथि नेपालकालागि पूर्नविचार गर्न आग्रह गरेको छ । नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले भारतीय समाचार संस्था एएनआईसँग शनिबार गरेको कुराकानीमा यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
एनएनआईसँग कुराकानी गर्दै डा खतिवडाले भारत सरकारको यो निर्णय नेपालकालागि एउटा झटका भएको बताए । उनले भने,भन्दै उनले भने,‘नेपालको निर्यातको २५ प्रतिशत हिस्सा पाम आयल उद्योग सँग छ । यसमा लगाइएको प्रतिबन्धले हाम्रो उद्योगमा प्रतिकुल प्रभाव परेको छ । भारत सरकारको यो निर्णय हामीले सोचेकै थिएनौ । नेपालको लागि यो एउटा झटका भएको छ ।’
कुराकानीमा डा खतिवडाले भारत सरकारले आफने निर्णयमा नेपालकालागि पूर्नविचार गर्ने आशा व्यक्त गरे । उनले भारत सरकारसँग कुटनीतिक माध्यमबाट यस बारेमा कुराकानी भइरहेको बताउँदै आवश्यक परेको खण्डमा राजनीतिक माध्यमबाट पनि कुराकानी गर्न सकिने बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले ११ अर्ब बराबरको रिफाइन्ड पाम आयल भारत निर्यात गरेको छ । नेपालबाट भारतमा निर्यात गरिने सबै भन्दा ठूलो आकारको उत्पादन हो ।
भारत सरकारले गत ८ जनवरीमा पाम आयलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएके थियो । भारतले मलेशिया र इण्डोनेसियाबाट ठूलो मात्रामा पाम आयल आयात गर्ने गरेको थियो । मलेशियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले भारतको आलोचना गरेपछि मोदी सरकारले मलेशियालाइ निशाना बनाउन चाहेको थियो । त्यसकारण यो प्रतिबन्ध लगाइएको भारतीय संचारमाध्यमहरुले जनाएका थिए ।
भ्रष्टाचार गर्ने सूचीमा नेपाल सुधारोन्मुख, कम भ्रष्टाचार गर्नेमा दक्षिण एशियामा भूटान अगाडि
भ्रष्टाचार गर्ने देशको सूचीमा नेपालले आफ्नो स्थान सुधार गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले शुक्रबार सार्वजानिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक–२०१९’ अनुसार नेपाल तीन स्थान माथि उक्लिएको छ ।
नेपाल विश्वका १८० देशहरुको सूचीमा कूल १०० अंकमध्ये ३४ अंक प्राप्त गरेर ११३औँ स्थानमा परेको हो । सन् २०१८ मा ३१ अंकसहित नेपाल १२४औँ स्थानमा थियो ।
विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भिडिइउम समेत गरी छ संस्थाका सर्वेक्षणका आधारमा नेपालको सुधार देखिएको हो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अध्यक्ष डेलिया फरेरा रुवियोका अनुसार सरकारी तहमा हुने भ्रष्टचारबाट आजित जनतामा राज्यका निकायप्रतिको घटदो विश्वास घटाउन राजनीतिक सदाचारतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने देखिएको छ ।
दलको चुनावी खर्चमा चन्दा र सहयोगबाट सिर्जना हुने भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक व्यवस्थामा पर्ने पैसाको प्रभाव अन्त्य गर्नुपर्ने देखिएको सो अवधारणामा उल्लेख छ ।
दक्षिण एशियामा भुटान अगाडि
दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार गर्ने देशमा भूटान परेको छ । ६८ अंक प्राप्त गरी भूटान २५औँ स्थानमा छ । यस्तै श्रीलङ्का ३८ अंक प्राप्त गरी ९३औँ स्थानमा, माल्दिभ्स २९ अंक प्राप्त गरी १३० औँ स्थानमा र अफगानिस्तान १६ अंक प्राप्त गरी १७३औँ स्थानमा छ । भारत र चीन समान ४१ अंक प्राप्त गरी ८०औँ स्थानमा परेका छन् ।
सबैभन्दा कम र बढी भ्रष्टाचार गर्ने मुलुक
सन् २०१९ मा विश्वमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशमा डेनमार्क रहेको छ भने सो राष्ट्रले ८७ अंक प्राप्त गरेको छ । विश्वमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देश सोमालिया रहेको छ । सो राष्ट्रले नौ अंक प्राप्त गरेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका महासचिव मुकुन्द प्रधानका अनुसार सार्वजनिक पदको दुरुपयोगमा भ्रष्टचार विरोधी निकायको कारवाही, न्यायपालिकाका काम कारवाही, कर असुली सम्बन्धित विषय, सुरक्षा निकाय खासगरी नेपाली सेनामा सदाचारको पहल लगायत सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिक संस्थाको भूमिकाजस्ता कारणले नेपालको भ्रष्टाचार प्रवृतिमा केही सुधार आएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
भारतीय सहयोगमा निर्मित विद्यालय उद्घाटन
भारत सरकारको सहयोगमा काठमाडौं, थानकोट स्थित अरविन्द आश्रम विद्यालयको नव निर्मित विद्यालय भवनको औपचारिक उद्घाटन गरिएको छ । भारतीय राजदूतावासका कार्यवाहक राजदूत डा. अजय कुमारले बुधबार नवनिर्मित विद्यालय भवनको उदघाटन गरेका छन् ।
नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सम्बन्धन प्राप्त यस आवासीय विद्यालय सन् १९९३ मा श्री अरविन्द योग मन्दिरले स्थापना गरेको हो । यस विद्यालयले करिब २६० विद्यार्थीलाई माध्यमिक तहको शिक्षा प्रदान गरिरहेकाृे छ जसमध्ये ५३ प्रतिशत भन्दा बढी छात्रा रहेका छन् । अधिकांश विद्यार्थीहरु गरिब, विपन्न र अनाथ छन् जसका लागि विद्यालयले निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रावासको व्यवस्था गरेको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले उक्त परियोजनाको कार्यान्वयन गरेको हो ।
भारत सरकारको २करोड ८२लाख नेपाली रुपैया बराबरका अनुदान सहयोगमा निर्मित तीन तल्ले नयाँ संरचनामा ११ वटा कक्षा कोठा, तीनवटा प्रयोगशाला, चारवटा भण्डार कक्ष तथा दुई कर्मचारी कक्ष रहेका छन् । यसका अतिरिक्त लेखा, प्रशासन, रेकर्ड, पुस्तकालय, प्रधानाध्यापक, व्यक्तिगत सहायक, परीक्षा, बहुउद्धेश्यीय हल र फर्निचरका लागि एक–एक कोठाको व्यवस्था रहेको छ ।
यस नवनिर्मित संरचनाले विद्यार्थीहरुको सिकाई वातावरणलाई अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल सरकारको शिक्षाको क्षेत्रमा पूर्वाधार बिस्तार गर्ने परियोजनामा भारत सरकारले सहयोग गरेको हो । यस अघि पनि भारत सरकारले राजधानी लगायत विभिन्न जिल्लाका विद्यालयहरुको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको छ ।
‘सगरमाथा संवाद’मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको सहभागीताको आशा गरेका छौंः राजदूत आचार्य
विराटनगर स्थित एकीकृत जाँच चौकीको मंगलबारको संयुक्त उदघाटनका अवसरमा नेपाल सरकारका तर्फबाट सहभागी भएका भारतकालागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग संक्षिप्त कुराकानी भएको बताएका छ्न। उनले एनआईबि संवाददातासँग कुरा गर्दै भने, ‘मोदीजी सँग प्रत्यक्ष अभिवादन साटन पाएँ । छोटो कुराकानीमा उहाँले नेपाल भारत मैत्री सम्बन्ध अगाडि बढेको भन्दै सम्बन्धलाइ थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँको नेपाल प्रतिको आत्मियता सम्बोधनमा मात्र थिएन । प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि अनुभव मैले अनुभव गरे । ’
सगरमाथा संवादमा सहभागी हुने संभावनाबारे आचार्यले भने, ‘नेपाल सरकारले आयोजना गर्न लागेको पहिलो सगरमाथा संवाद कार्यक्रममा उहाँ सहभागी भइदिनुस भन्ने हामीले आशा अपेक्षा गरेका छौं, त्यसमा पनि हुन सक्छ , अथवा त्यसभन्दा पछि पनि हुन सक्छ । अहिले यसै भन्न सकिदैन ।’
तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा आफैले यो वर्षमा पक्का नेपाल भ्रमण गर्ने भनेको उल्लेख गर्दै राजदूत आचार्यले भने,‘आफ्नो सम्बोधन मै उहाँले २०२० मा पक्का नेपाल भ्रमण गर्ने भन्नुभएको छ । कहिले भन्ने कुरा उहाँको अनुकुलतामा तय हुने हो । फेरि पनि हाम्रो प्रयास छिट्टै भ्रमण होस भन्ने रहेको छ ।’
भिडियो कन्फरेन्स मार्फत गत सेप्टेम्बरमा दुवै मुलुकमा प्रधानमन्त्रीद्धयले गरेको दक्षिण एशियाकै पहिलो पेट्रोलियम पाइपलाइन उदघाटन कार्यक्रममा पनि राजदूत आचार्य सहभागी थिए । उनी दोश्रो पटक मंगलबार गरिएको आइसीपी उदघाटनमा सहभागी भएका हुन् । राजदूत आचार्यले उदघाटनमा सहभागी भएपश्चात भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग संक्षिप्त कुराकानी राम्रो लागेको अनुभव ट्वििटरमा साझा गरेका थिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गरिएको यो उदघाटन कार्यक्रममा मोदीसँगै भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभाल, विदेश सचिव विजय कुमार गोखले तथा राजदूत आचार्य बसेका थिए ।
सोही अवसरमा प्रधानमन्त्रीद्धयले भारत सरकारको सहयोगमा गोर्खा तथा नुवाकोट जिल्लामा आवासीय पूनर्निर्माण परियोजनाको अवलोकन गरेका थिए । २०१५ मा नेपालमा आएको शक्तिशाली भुकंप पछि भारतले गोरखा र नुवाकोट जिल्लामा ५० हजार आवास गृह निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो । जसमध्ये ४५ हजार घर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
भारतसँगका थाती रहेका विषय टुङ्गो लगाउने समय आएको छ : ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल र भारतबीचका थाती रहेका द्विपक्षीय विषय कूटनीतिक संवादबाट टुङ्गो लगाउने समय आएको बताएका छन् । विराटनगरस्थित एकीकृत भन्सार जांच चौकीको मंगलबार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगै भिडियो कन्फरेन्समार्फत उदघाटन गरेका ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा आपसी सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेकाले यसका आधारमा आपसी सहमति र साझेदारीका विषयलाई ‘एक्सन’मा उतार्ने समय आएको बताए ।
त्यसकालागि सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयले कार्यसूची तय गर्ने जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र भारत इतिहास, भूगोल र संस्कृतिका हिसाबले नजीकका छिमेकी भएका नाताले आपसी सहकार्यलाई बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सम्बोधनका क्रममा ओलीले नेपाल सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ जस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको ‘सबका साथ, सबका विश्वास’ को नारा रहेको उल्लेख गर्दै विगतमा आफू भारत भ्रमणमा जाँदा वीरगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी तथा पाँच महिनाअघि मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको संयुक्त उदघाटन गरिएको स्मरण गरे ।
ओलीले भूकम्पछिको पुनःनिर्माण तथा हाल गोरखा र नुवाकोटमा निजी भवनको निर्माणमा गरिएको सहयोगकालागि भारत सरकारलाई धन्यवाद दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वास्थ्यस्थितिबारे चासो दिई शीघ्र लाभको कामना गरेकामा पनि भारतीय समकक्षीलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो स्वास्थ्य सुध्रँदै गएको जानकारी गराए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमणमा आउन पुनःनिमन्त्रणा दिँदै उनले आफूहरु स्वागत गर्न तत्पर रहेको बताए ।
जवाफमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सो एकीकृत जाँचचौकीको सञ्चालन दुई देशबीचको तीव्र विकासको प्रतीक भएको जनाउँदै यसले सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्नाका साथै कामलाई सरल बनाउने बताए । रक्सौल र जोगबनीमा यसअघि नै यस्तो जाँचचौकी सञ्चालन भएको र गत वर्ष वीरगञ्जमा सञ्चालन गरिएको स्मरण गर्दै उनले आगामी दिन पनि अन्य स्थलमा पनि एकीकृत जाँचचौकीको निमार्ण गरिने बताए ।
गोरखा भूकम्पमा नेपालीले भोग्नुपरेको दर्द र त्रासदीमा पहिलो उद्धारकका रुपमा भारतले सघाएको स्मरण गर्दै उनले हाल निर्माणाधीन भवनहरु बलियो हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।––रासस